Google धरतीमा एक्सेल, UTM निर्देशांकबाट - Geofumadas
घर/डाउनलोडहरू/यूटीएम समकक्षहरूबाट Google धरतीमा एक्सेल
डाउनलोडहरूFeaturedगुगल अर्थ / नक्सा
म एउटा सम्पत्ति निर्माण गर्न क्षेत्रमा जानु भएको छ, निम्न तालिकामा देखाईएको छ र म Google धरतीमा हेर्न चाहन्छु, मैले लिईएको फोटोहरूको एक जोडी सहित
टेम्प्लेटको प्रतिभा केवल एक मात्र हो:
कन्फिगर गर्दछ UTM समन्वयएक दशमलव रूपरेखामा भौगोलिक, यो Google को आवश्यकता हो
तपाईंले गन्तव्य फाइलको नाम कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ
Kml तह नाम दिन्छ
अवस्थित फाईल पुन: उल्टाउनुहोस्, भले यो पहिले देखि नै उत्पन्न हुन्छ
यसले विवरणमा html ट्यागहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जस्तै छविहरू, हाइपरलिंक, आदि।
टेम्प्लेटको लागि चयन गर्न गोल्डोफाइलको लागि तयार छ, हामी जान्दछौं कि Google धरतीको लागि हामी हामीले WGS84 चयन गर्नुपर्छ।
पहिलो स्तम्भमा हामी डेटा प्रविष्टि गर्दछौँ जुन Google को रूपमा देखा पर्नेछ लेबल.
अर्को दुई UTM निर्देशांकहरूमा, हाम्रो सिस्टम अल्पविराम र पोइन्टलाई दशमलव विभाजकको रूपमा हजारको विभाजकको रूपमा प्रयोग गर्न कन्फिगर गरिएको छ भन्ने ख्याल राख्दै। त्यसोभए 599.157,90 599157.90 .XNUMX .१XNUMX० जस्ता निर्देशांकलाई अनुमति छैन यो XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX१XNUMX. as ० को रूपमा लेख्नुपर्दछ
अर्को स्तम्भमा हामी क्षेत्र प्रविष्ट गर्दछौं। केवल पहिलो लाइनमा राखेर, अन्य परिवर्तन हुनेछ। यद्यपि तिनीहरू म्यानुअली परिवर्तन गर्न सकिन्छ यदि डाटा दुई क्षेत्रहरूको सीमामा थियो। यस्तै गोलार्ध; यस अवस्थामा म बोगोटाबाट डाटा प्रयोग गर्दैछु, त्यसैले म जोन १ 18 र उत्तरी गोलार्ध प्रयोग गर्छु।
र अन्तमा विवरण, जुन हामीले हेर्नेछौं हामी Google Earth मा बिन्दुमा क्लिक गर्छौं।
यी समन्वयहरू Google नक्सामा कसरी अपलोड गर्ने हो र त्यसपछि Google धरतीमा डाउनलोड गर्नुहोस्
चरण १. डेटा फीड टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्नुहुने तस्विरमा देखाइएको उदाहरण प्रयोग गर्न यो टेम्पलेट डाउनलोड गर्नुहोस्.
चरण the. डाटा पुनप्रक्रिया गर्नुहोस्। पूर्वनिर्धारित द्वारा डाटा लोड WGS84 मा छ, गुगलले प्रयोग गरेको रूपमा। तर यो कार्यक्षमताले तपाईंलाई अर्को अनुमानित समन्वय प्रणालीमा परिवर्तन गर्न र नक्शालाई ताजा गर्न अनुमति दिन्छ। एक उदाहरणको रूपमा, म क्लार्क १ 1866 मा स्विच गर्दै छु र शिरहरू नक्शामा पुनः प्रक्षेपित भएको हेर्नुहोस्।
चरण 5.. gtools सेवा प्रयोग गरी KML नक्सा डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईं डाउनलोड कोड प्रविष्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईंसँग गुगल अर्थमा अवलोकन गर्न सकिने फाइल छ; एप्लिकेसनले देखाउँदछ कि डाउनलोड कोड कहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ जसको साथ तपाईं download०० पटक डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जुन कुनै डाउनलोडमा प्रत्येक डेटाहरूमा gtools एपीआई प्रयोग गरेर कतिवटा भेरिटिक्सहरू हुन सक्दछन् भन्ने कुनै सीमा छैन। केवल नक्शाले Gooogle Earth बाट निर्देशांकहरू देखाउँदछ, तीन आयामिक मोडेल सक्रियताका साथ।
अर्को विकल्प: निर्देशांकहरू एक्लो म्याक्रोको प्रयोग गरेर किलोमिटर फाईलमा रूपान्तरण गर्नुहोस्
एकचोटि ट्याबुलर डाटा भरियो, किमीएल फाइलको नाम र ठेगाना जहाँ यो भण्डार गरिन्छ दायाँ तिर देखा पर्दछ। यस मामला मा यो रूपमा देखिन्छ C: \_ क्यारियर 25 X.kml
निचला पङ्क्तिमा हामी नाम लेख्दछौं कि तहले केएलईएल फाइलमा यो अवस्थामा हुनेछ: लिफ्टिंग केयर 25 X
नतिजा यो छ: पोइन्टमा छोएर अन्तिम एक्सेल स्तम्भको वर्णन प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
अन्तमा, हामी तयार हुँदा हामी हरियो बटन थिच्दछौं, र फाइल उत्पन्न गरिएको हुनुपर्छ।
नतिजा, जब यसलाई गुगल अर्थमा खोल्दै निम्न छ। लेयरको नाममा हेर्नुहोस्, जसै हामी यसलाई कल गर्दछौं, र त्यहाँ विन्दुहरू छन् जसको वर्णन सहित; तिनीहरूलाई छुने विवरणको प्रदर्शन उठाइन्छ। यदि वस्तुहरू वा लेबल तिनीहरू धेरै ठूला छन्, तिनीहरू Google धरतीमा अनुकूलित तहमा क्लिक गरेर गुणहरू छनौट गर्न सकिन्छ।
फोटो लिङ्क किलोमिटरमा थप्न को लागी
यो सरल छ, मानिन्छ कि स्तर बैंकको विस्तारमा म क्याडेटिस्ट प्लेटको छवि राख्न चाहन्छु, त्यसपछि मैले लेखेको विवरणसँग सम्बन्धित कक्षमा:
सम्पत्ति सीमा, Cadastre स्तर बैंक
त्यसैगरि, यदि मैले बिन्दुमा फोटो बुझेको छु, म घरको मुखौटाको फोटो राख्न चाहन्छु, प्रक्रिया यस्तै छ।
यदि तपाइँ थप पङ्क्तिहरू सम्मिलित गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँ अवस्थित व्यक्तिहरूको प्रतिमा बनाउनुहुन्छ ताकि तिनीहरू सूत्रको साथ जान्छ।
यदि तपाइँले गर्नुभयो भने, स्तम्भहरू थप्न आवश्यक छैन, यसले काम रोक्न सक्छ।
एक्सेल फाईल खोल्दा तपाईंले म्याक्रोको कार्यान्वयन स्वीकार गर्नुपर्दछ
यदि यसले तपाईंलाई त्रुटि सन्देश पठाउँदछ भने, यो हुन सक्दछ कि C: डाइरेक्टरीमा लेख्न अनुमति छैन, तपाईं सी: \_ प्रयोगकर्ताहरू \_ डाउनलोडहरू \_ जस्तै अर्को फोल्डर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म फोल्डर अवस्थित हुन्छ।
यहाँबाट तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ kml फाइल जस्तो हुनु पर्छ।
एक्सेलमा टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न प्रतीकात्मक योगदान आवश्यक छ, जुन तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ पेपाल वा क्रेडिट कार्ड.
यदि तपाईसँग के छ भने अक्षांश, देशान्तरको प्रकारको भौगोलिक समन्वयहरू, र तपाइँ Google धरतीमा पठाउन चाहानुहुन्छ, टेम्प्लेट यो हो.
यो हुन सक्छ, अनुप्रयोग प्रयोग गर्दा, निम्न घटनाहरू मध्ये एक हुन सक्छ:
त्रुटि 75 - फाइल मार्ग।
यो हुन्छ किनकी त्यो मार्ग परिभाषित गरिएको छ कि kml फाईल सुरक्षित छ जहाँ पहुँचयोग्य छैन वा यस कार्यको लागि कुनै अनुमति छैन।
आदर्श रूपमा तपाई डिस्क डिस्कमा पथ राख्नुपर्दछ, जसमा डिस्क सी भन्दा कम प्रतिबन्धहरू छन्। उदाहरण:
अंकहरू उत्तरी ध्रुवमा आउँदैछन्।
यो सामान्यतया हुन्छ, किनभने हाम्रो सन्झ्यालमा, काम गर्न टेम्प्लेटको लागि निर्देशनमा संकेत गरिएको रूपमा, क्षेत्रीय कन्फिगरेसन क्षेत्रीय प्यानलमा स्थापित हुनुपर्छ:
-पोषण, दशमलव विभाजकका लागि
-मा, हजारौं विभाजकका लागि
-मा, लिस्ट विभाजकका लागि
त्यसो त, एक डेटा जस्तै: बाह्र सेन्टीमिटरको साथ एक हजार सात सय र आठौं मिटरहरू 1,780.12 को रूपमा हेर्न सकिन्छ
छविले यो कन्फिगरेसन कसरी गरिन्छ भनेर देखाउँछ।
यो अर्को छवि हो जुन कन्फिगरेसनले नियन्त्रण प्यानलमा देखाउँछ।
एकपटक परिवर्तन भएपछि, फाइल फेरि उत्पन्न हुन्छ र त्यसपछि, अंकहरू देखा पर्नेछ जहाँ यो Google धरतीमा मिल्दछ।
यदि तपाइँसँग एउटा प्रश्न छ भने, समर्थन ईमेल edit@geofumadas.com मा लेख्नुहोस्। यो जहिले पनि तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको विन्डोजको संस्करणलाई संकेत गर्दछ।
सिक्ने AutoCAD हेर्दै
तपाईंको एक्सचेन्जमा स्वतः सीएड 3D पाठ्यक्रम, $ 34.99 को लागि
गुगल अर्थमा 3D भवनहरू कसरी बढाउने
गुगल एलिभेसन डाटा को सत्यता परीक्षण गर्दै - आश्चर्य!
सेप्टेम्बर, 2020 बजे
यदि तपाईंले टेम्प्लेट किन्नुभयो भने, तपाईंको मेलमा सम्बन्धित समर्थन मेलमा लेख्नुहोस्।
सामान्यतया यो मेल: सम्पादक @ geofumadas हो। com
टोकन यहाँ प्राप्त गर्नुहोस् वर्कर ikke। Hvor kan jeg får tak i den?
टोकन प्राप्त गर्नुहोस् यहाँ काम गर्दैन। म कहाँ पाउन सक्छु?
नमस्ते, के तपाइँ अनुप्रयोगको डेमो वा अस्थायी परीक्षण साझा गर्न सक्नुहुन्छ "UTM समन्वयहरूबाट गुगल अर्थमा एक्सेल", केवल शैक्षिक उद्देश्यका लागि र जसरी म तपाइँको आवेदन प्रवर्द्धन गर्नेछु। धन्यवाद।
मार्च, 2019 बजे
तपाईको विन्डोजको क्षेत्रीय सेटिङहरूमा जानुहोस् र बिन्दु बिन्दु विभाजक र अल्पविरामका रूपमा अल्पविरामको रूपमा बिन्दु सेट गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग अझै पनि समर्थन ईमेलमा टेम्प्लेटको खरिदको साथमा शङ्काहरू लेख्नु भएको छ भने।
Wueber Bogado भन्छिन्:
यो मलाई उत्तर ध्रुवमा लाग्छ र बिन्दु क्लाउड अस्युसन डेल पाराग्वेमा छ
के कृपया मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
समस्या समर्थन द्वारा हल गरिएको थियो।
यो कार्यालय 365 र 64 बिट्सको नयाँ संस्करणहरूसँग संगतताको समस्या थियो।
र अधिक पढें।
वा समस्या तपाईंको परिचालन प्रणालीको क्षेत्रीय कन्फिगरेसन हो।
तपाईंले यो ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ कि एक रिक्त राखिएको छ, जस्तै मिलार विभाजक, सूची विभाजक वा एक खाली बिन्दु सेपरेटरको रूपमा खाली।
मोडेल खरिदका लागि समर्थन प्राप्त गर्न, खरिदका साथ समर्थनको इ-मेल पठाउनुहोस्।
Ulisses रिबन जुनियर भन्छिन्:
साइटको सिफारिसहरू पालना गर्नुहोस्, जानकारी घुसाउनुहोस् र त्रुटि फिर्ता गर्नुहोस् "Microsoft Visual Basic" कार्यान्वयन समय त्रुटि "13": असंगत प्रकार।
अगस्ट, 2018 बजे
तपाईं किन पोलमा डेटा पठाउनुभएको कारण, किनकि तपाईको सन्झ्यालमा तपाईंले यो कन्फिगरेसन गर्नु पर्छ:
बिन्दु, हजारौं को विभाजकको रूपमा
अल्पविराम, दशमलवहरूको विभाजकको रूपमा
अल्पविराम, सूची विभाजकको रूपमा।
यदि तपाइँसँग कुनै शंका छ भने, हामीले तपाईंलाई एक इमेल पठाएका छौं।
यो उत्तर ध्रुव गर्न पठाउँछ, कुनै राम्रो गणना गर्छ, म यसलाई संग पनि डाटा Excel मा रूपमा आउँदै र उत्तर ध्रुव पठाउँछ गरेको छ, यो आशा, केही लागि cobreis र माथि काम गर्दैन एक मजाक देखिन्छ समस्या solucioneis।
यदि म मेरो पैसाको फिर्ती माग्दैन भने।
तपाइँ गन्तव्य फाइल मार्ग प्रमाणित गर्नुभयो?
मैले कार्यक्रम चलाउँछु र मैले "रन-टाइम त्रुटि '75' प्राप्त गर्छु:
76 त्रुटि सामान्यतया फोल्डरसँग सम्बन्धित छ जुन तपाईँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ फाइल सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं डाइरेक्टरीमा एक मार्ग प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आदर्श D: र C: किनकि धेरै पटक तपाईसँग सी मा प्रत्यक्ष लेखन अनुमति छैन:
यो क्षेत्रीय बिन्दु सेटिङहरू जस्तै हजारौं विभाजक रूपमा दशमलव र अल्पविराम विभाजन जस्ता समीक्षा गर्न राम्रो विचार हो।
कुनै पनि संदेह तपाईंले मलाई बताउनुहुन्छ।
कार्लोस एस्टोपेयर भन्छिन्:
नमस्कार, म म्याकको लागि एक्सेल प्रयोग गर्दैछु र मैले एउटा त्रुटि नम्बर 76 प्राप्त गर्दछु
Antônio Felipe Abem Athar Par parente भन्छिन्:
Quero Excel अक्षांश को Google र हार्ट संग सम्बन्धित एक्स एक्स
जनवरी, 2018 बजे
तपाईसँग कन्फिगरेसन सही छ।
के तपाइँसँग एक्सेलको स्तर वा क्षेत्रीय विन्डोज कन्फिगरेसनमा छ?
सहयोगलाई सहयोग गर्न, तपाई यसलाई ईमेल सम्पादकमा (ए) भौगोमादास गर्न सक्नुहुन्छ। com
फ्रान्सेस्का मोन्जिजजी भन्छिन्:
मलाई लिंक पठाउनुभएकोमा धन्यवाद। अब, जुनसुकै उसले गर्दछ, उसले मलाई उत्तर ध्रुवमा पठाउँछ।
मैले UTM एन पहिलो र ई पछि पछि, र त्यसपछि पछाडि राखे। मैले हजारौं बिन्दुहरू अंकहरू र अल्पविरामद्वारा विभाजित गरेको छु।
समन्वय उत्तरी चिली (19s) बाट हो।
तपाईंलाई पोस्ट अफिसमा पठाएको थियो, समस्या यो हो कि तपाईंले मेल गलत तरिकाले लेख्नुभयो,
हामीले यसलाई लेखेका सही ईमेलमा पठाएका छौं।
मैले उत्पादनको लागि दुई पटक भुक्तान गरेँ र मैले टेम्पलेट कहिल्यै पाएन।
के तपाईं मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया?
लेनदेन नम्बर 5SV58331V3337363F हो
नोभेम्बर, 2017 बजे
नमस्ते क्यारोलिना, हामीले पहिले नै तपाइँलाई तपाइँको इमेलमा लिङ्क पठाएका छौं। यो तपाईंको स्प्याममा गएको हुन सक्छ।
केरोलिना ट्रुजिलो भन्छिन्:
नमस्कार, म तपाईंलाई भन्छु कि मैले तपाईंलाई पहिले नै भुक्तान गरिसकें तर तपाईंले मलाई डाउनलोड गर्न विकल्प दिनुभएन। PayPal बाट क्यारोलिना Trujillo नाममा भुक्तान गर्नुहोस् र रसिद संख्या 797849290 9052642 XNUMX XNUMX XNUMX२२ × ०० XNUMX ०XNUMX२XNUMX२ थियो
मैले पहिले नै टेम्प्लेटलाई ईमेलमा पठाएको छु, यो हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै वर्णन गर्दछु।
धन्यवाद धेरै र नमस्कार।
टेम्प्लेट 500 बिन्दु नजिकको लागि कन्फिगर गरिएको छ।
यसलाई थप बिन्दुहरूमा विस्तार गर्न, यो कोड परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। टेम्प्लेटलाई editor@geofumadas मा पठाउनुहोस् र हामी यसलाई तपाईंको लागि विस्तार गर्नेछौं।
हामी स्प्रिेडशिट विस्तार गर्न प्रयास गर्दैछौं, तर Google धरतीको साथ .kml फाइल खोल्दा हामी स्प्रेडशीटको मूल पङ्क्तिसँग सम्बन्धित डेटा मात्र प्राप्त गर्छौं। हामीले यसलाई आवश्यक बिन्दुहरूको भोल्युम परिचय गर्न कसरी विस्तार गर्न सक्छौं? तपाइँसँग प्रविष्टि गर्न सीमाहरूको सीमा छ?
धन्यवाद र उत्तम सम्बन्ध।
शुभ प्रभात जोन पल। हामीले डाउनलोडको लागि तपाईंको इमेलमा लिङ्क फर्वार्ड गरेका छौं। सम्भवतः यो तपाईंको स्प्याममा गएको थियो।
थप रूपमा, हामीले तपाईंले बनाएको डुप्लिकेट भुक्तानी तिर्नु भएको छ।
यदि तपाईंसँग अर्को प्रश्न छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्
तिनीहरूले मलाई फाइलको साथ पेच गरे, मैले दुई पटक "प्रतीकात्मक योगदान" भुक्तान गरे र मैले फारम पाइन।
75 त्रुटि idica जुन तपाईंले दिनुभएको पथमा लेख्ने अधिकारहरू छैन, यसलाई सी सीमा सीधा बनाउने सट्टामा, अर्को ठेगाना प्रयास गर्नुहोस्, वा सबफल्डर वा ई डिस्क
Jean Braga भन्छिन्:
मलाई महंगी, परिवर्तन गर्न को लागि पेंटो र कुरुवा कुनै पनि पिक्सेल डी विन्डोज गर्न को लागि Windows, समस्या रह्छ।
"कार्यान्वयन समय '75' मा त्रुटि:
पथ/संग्रह पहुँच त्रुटि"।
स्थान वा अभिलेखीय kml em: c: \_ क्यारियर 25 X.kml
विवरण: क्यारियर राइजिंग 25 X
कृपया मलाई यो समस्या समाधान गर्नुहोस्।
यो समन्वयहरू प्रशोधन गर्न गलत छ।
डट (।) र अल्पविराम (,) तलको रूपमा हो।
मैले एक्सेलको कास्कर परिवर्तन गरेर यो परिवर्तन गरे, तर यसले काम गर्दैन।
म यो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छु ???
उदाहरणका रूपमा फाइलहरूलाई बीमसँग सम्बन्धित मार्गहरू
फाइल: /// सी: / यूजरहरू / जीग्रोमाडस / चित्रहरू / 005c_got.png
मार्गहरू फेला पार्नको लागि सजिलो तरिका, तपाईंले गुगल क्रोम खोल्नुहोस्, र यहाँबाट तपाईंले "ctrl + o" प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि फाइल फेला पार्नुहोस्। url मा तपाईंले मार्ग देख्नुहुनेछ।
सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीले समाधान गरेका छौं, तथापि, हाम्रो प्रश्न अब कसरी स्थानीय रूपमा बिन्दुहरूमा छविहरू पेश गर्न सकिन्छ। कुन मार्ग हामीले परिचय गर्नुपर्छ?
शुभ बिहान गुस्टाभो।
तपाईंको कम्प्युटरको क्षेत्रीय कन्फिगरेसनमा जाँच गर्नुहोस् कि हजारौंको विभाजन अल्पविराम हो र दशमलवको कन्फिगरेसन पोइन्ट हो।
यदि यसले अझै पनि समस्या उत्पन्न गर्दछ भने, सम्पादकमा लेख्नुहोस्, तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको सूचनाको साथ तपाईंको फाईल पठाउनुभयो।
(geofumadas कम मा सम्पादक)
Greetings to Oviedo
KML फाइल उत्पन्न गर्दा एक्सेल टेम्प्लेटको खरिद गरिसकेको छु, यो उत्पन्न हुन्छ तर गुगल धरतीमा समन्वयहरू तपाईंको साइटमा देखा पर्दैन, यसले हामीलाई प्रत्येक पटक उस्तै पोष्ट (उत्तरी ध्रुव) मा लिन्छ।
हामी स्पेनको उत्तरमा छौं र हाम्रो विचारले लिइएको बिन्दुहरू र तिनीहरूको सम्बन्धित फोटाहरू पत्ता लगाउन टेम्प्लेटको प्रयोग हो।
जून, 2016 बजे
कहिलेकाहीँ यो स्प्याम फोल्डरमा जान्छ,
चेक गर्नुहोस्, र यदि तपाईंलाई समस्या छ भने, ईमेलमा लेख्नुहोस् जुन लेनदेनको साथ आउँछ।
प्रिय, मैले पेपैलसँग खरिद गरेँ, तर म अझै पनि डाउनलोड लिंकको साथ मेल प्राप्त गर्दैन। प्रतीक्षा समय कति लामो छ?
हामीले तपाईंलाई इमेल मार्फत लिङ्क पठाएका छौं। जे होस्, तपाईले सधैं स्प्याम हेर्नु पर्छ, कहिलेकाहीँ यो त्यहाँ जान्छ।
मैले पहिले नै Paypal मार्फत भुक्तान गरेको छु, तर मैले टेम्प्लेट डाउनलोड गर्न कुनै लिंक पाएको छैन। मैले स्प्याम जाँच गरेको छु र यो पनि देखा पर्ने छैन। मेल प्राप्त गर्न कति लामो लाग्छ?
अप्रिल, 2016 बजे
तपाईंले दुई पटक किनेको टेम्प्लेट हामीले पहिले नै फिर्ता गरिसकेका छौं। यदि तपाइँसँग थप समस्याहरू छन् भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
हामीले तपाईंलाई मेल मार्फत जवाफ दिएका छौं। कहिलेकाहीँ यो स्प्याममा जान्छ, तर हामीले तपाईंलाई लिङ्क रिसेट गरेका छौं। यदि तपाइँसँग समस्या छ भने, हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
CIRILO GIRALDO SALAZAR भन्छिन्:
र पेपाल को माध्यम ले गरिएको लेनदेन को पहिचान को पूरा गर्न को लागि:
कृपया शीघ्र जवाफको लागि पर्खनुहोस्।
क्षणको लागि ... धन्यवाद
geofumadas.com का सज्जनहरू, मैले PayPal मार्फत "EXCEL TO GOOGLE EARTH FROM UTM COORDINATES" उत्पादनको लागि भुक्तान गरेको छु र कार्यक्रम डाउनलोड गर्दा यसले मलाई PayPal मा फिर्ता पठाउँछ, र गल्तीले $4.99 USD फेरि चार्ज भयो।
म यो आशिष् उत्पादन प्राप्त गर्न को लागी छैन कि म लगभग $ 10.00 अमरीकी डालर को भुगतान गर्नु पर्छ।
कार्यक्रमलाई डाउनलोड गर्न के गर्न मलाई भन्नुहोस् वा मलाई कति पर्खनु पर्दछ यदि तिनीहरूले मेरो व्यक्तिगत मेलमा पठाउँछन् भने; मैले आफ्नो नाममा थप भुक्तानी पुन: प्राप्त गर्न के गर्न चाहन्छु।
स्प्याम जाँच गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ ऊ त्यहाँ जान्छ। यदि तपाईंलाई समस्या छ भने, इनभ्वाइसमा देखा पर्ने इमेलमा लेख्नुहोस्।
टेम्प्लेट किन्नुहोस् र म मेलमा पुग्न सकेन, किनकि म मलाई पठाउन चाहन्छु, धन्यवाद।
तपाईंको स्प्याम मेल जाँच गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ ऊ त्यहाँ जान्छ। यदि तपाइँसँग कुनै समस्या छ भने, भुक्तानी पुष्टिकरणमा संकेत गरिएको इमेलको जवाफ दिनुहोस्।
कार्लोस कोरो भन्छिन्:
मैले भुक्तान गरेँ र मैले फाइल प्राप्त गरेन।
अक्टोबर, 2015 बजे
फाइल बचत हुनेछ जहाँ मार्ग परिवर्तन गर्नुहोस्।
राम्रो तरिकाले, यो डिस्क सीमा छैन, तर डिस्क डीमा, किनकी कहिलेकाहीं लेखन C मा उपलब्ध छैन
मैले PC को हार्ड ड्राइभको साथ एक समस्या थियो र मलाई यो परिवर्तन गर्न थियो। म यो फारम UTM लाई Google धरतीमा पठाउनको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु र यसले मलाई निम्न सन्देश दिन्छ
76 रन टाइम त्रुटि भएको छ
सेप्टेम्बर, 2015 बजे
यो तपाईको मेलमा छ। कहिलेकाहीँ यो स्पाममा जान्छ भनेर जाँच गर्नुहोस्
जुआन कार्लोस वेगा भन्छिन्:
मैले पहिले नै भुक्तान गरेँ, मैले टेम्पलेट डाउनलोड गरेको हुँ?
नमस्ते जोसे लुइस
यो टेम्प्लेट UTM डाटा प्रविष्ट गर्नको लागि बनाइएको हो। सुविधाहरू दशमलव डिग्री वा डिग्री/मिनेट/सेकेन्डमा थप्न सकिन्छ।
हो, तपाई तस्बिरहरू थप्न सक्नुहुनेछ।
आइकनको प्रकार परिमार्जन गर्नुहोस् ... यो हालको टेम्पलेटको कार्यक्षमतामा छैन।
शर्तहरू अन्तर्गत टेम्पलेट अनुकूलन गर्दै ... तपाईंले लागत US $ 50।
नमस्ते जी! कहिलेकाहीँ तपाईंले मलाई मेरो फाइलहरू Google धरतीमा अपलोड गर्न मद्दत गर्नुभयो, यो एक्सेलको टेम्प्लेटमा रुचि छ र म अनुरोध गरिएको रकम तिर्न इच्छुक छु, तर म केही शंकाहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु:
1-यसलाई डिग्री, मिनेट र सेकेन्ड वा दशमलव डिग्री प्रयोग गर्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
२-म समन्वय गरेर आइकनको प्रकार परिमार्जन गर्न सक्छु।
3 - म केहि बिन्दुमा तस्बिर थप्न सक्छु।
यी परिमार्जनहरू बनाइयो भने के यो लागत हुनेछ?
तपाईंको योगदानको लागि धन्यबाद ,,,,,
पृष्ठ रिफ्रेस गर्नुहोस्, तपाईंले डाउनलोड/खरीद लिङ्क देख्नुपर्छ
जुलियन मोरेल्स भन्छिन्:
म यो टेम्प्लेट प्राप्त गर्न चाहन्छु, यो बेचेको छ वा मैले कहाँ प्राप्त गर्न सक्छु
तपाईं लिंक कहाँ डाउनलोड गर्न संकेत गर्न सक्नुहुन्छ, म यो लेखमा पत्ता लगाउन सक्दैन
लेखमा लिंक प्रयोग गर्नुहोस्
अनुप्रयोग धेरै राम्रो देखिन्छ। म यसलाई कसरी डाउनलोड गर्छु?
म टेम्प्लेट कसरी डाउनलोड गर्छु ताकि म यो परीक्षण गर्न सक्छु?
ह्यूगो मन्टेस डे ओका भन्छिन्:
अफिसको काम सुधार्न धेरै राम्रो उपकरण, नमस्कार
एक रोचक अनुप्रयोग जस्तो देखिन्छ, यो प्रयास गर्नु पर्छ
नमस्ते शुभ रात्रि मेरो समस्या यो हो कि पहिले यो बाहिर आयो जब मैले kml "Execution error 75″ सिर्जना गरें र मैले उनीहरूले भनेका कुरा गरेपछि मलाई "Execution error 76″ प्राप्त भयो म के गर्न सक्छु?
हामीलाई समीक्षा गर्न फाइल पठाउनुहोस्।
अब सम्म यो राम्रो काम गरेको छ, यो हुन सक्छ कि केहि क्षेत्र तपाईं अरु तरिका को परिचय गर्दै छन्।
माइकल बेलस्को भन्छिन्:
विशेष रूपमा, यसले तिनीहरूलाई अक्षांश 32400.000000 र देशान्तर -1.000000° मा अनुवाद गर्छ रूपान्तरण क्यालकुलेटरहरूमा उही निर्देशांकहरू प्रयोग गरेर, यद्यपि, मैले गुगल अर्थमा बिन्दु सम्पादन गरेकोले, मैले क्यालकुलेटरको निर्देशांकहरू राखेको छु, र मेरो मूल सही छन् भनी प्रमाणित गर्छु। मलाई राम्रोसँग मिल्छ। मुरी मुरी धन्यवाद।
म जे गर्छु (मैले सबै कुरा कन्फिगर गरेको छु ताकि दशमलव एक बिन्दु र हजारौं अल्पविराम संग जान्छ) यसले मलाई सधैं भूमध्य रेखामा लैजान्छ। मलाई लाग्छ कि देशान्तर मेरो लागि ठीक छ, तर अक्षांश ० हो। विशेष गरी, मैले यी UTM ED0 डाटा घुसाउँछु जुन wgs50 उत्तर स्पेन (Navarra) सँग सम्बन्धित छैन र व्यवस्थित रूपमा गिनीको खाडीमा पुग्छ।
मेरो भुक्तानी खाता खाता अर्को ईमेल खातासँग लिङ्क गरिएको थियो र मैले यो इमेलको लागि पठाएको छु भने म सन्देश पठाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद
प्रायजसो, तपाइँ हजारौं प्रतीकहरूसँग समस्या भइरहेको छ।
ती गोल गरिएको UTM कोइरालाहरू कोसिस गर्नुहोस्, बिना अवधि वा अल्पसंख्यक यो समस्या हो कि हेर्न को लागी।
त्यसपछि तपाइँ आफ्नो मेसिनको क्षेत्रीय कन्फिगरेसनमा जानुहोस् र परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंले हजारौं विभाजक र सूची विभाजकको रूपमा अल्पविराम प्रयोग गर्न आवश्यक छ; दशमलव विभाजकको रूपमा बिन्दु।
मैले फाइल सिर्जना गरेको छु तर पृथ्वीमा हेर्दा यसले मलाई N पोलमा पठाउँछ। म तपाईंलाई भन्छु: मैले प्रयोग गर्ने UTM निर्देशांकहरू अक्षांश र देशान्तरमा निर्देशांकहरूबाट रूपान्तरित थिए, तर WGS50 को सट्टा ED84 ड्याटम प्रयोग गरेर। के मैले Excel मा प्रयोग गरिएको UTM ढाँचा दिनु अघि तिनीहरूलाई पास गर्नुपर्छ? जे भए पनि, मैले ग्रहण गरें कि यदि तिनीहरू मिलेनन् भने, चरण भिन्नता धेरै उच्च हुनेछैन, किनकि यदि मैले ED50 सँग WGS84 मा समानहरू (तिनीहरू स्पेनका हुन्) सँग प्रयोग गर्ने केही निर्देशांकहरू तुलना गरेमा, चरण भिन्नता। केहि मिटर छ, तर नक्सामा मलाई लाग्छ कि तपाईले केहि पनि देख्नु हुन्न, "लेबल" स्तम्भमा लेबलहरू पनि देख्नुहुन्न। म कहाँ गल्ती गर्दैछु कुनै विचार? चरणहरू र दशमलव ढाँचा सही देखिन्छ (जोन 29 सही छ?)।
मैले भौगोलिक बाट UTM मा रूपान्तरण गर्न को लागी एक को लागी लेखेको छु, तर मलाई गुगल मा पास गर्न को लागी फाइल उत्पन्न गर्न को लागी एक समस्या छ तर फाइल उत्पन्न गर्दछ तर सबै बिन्दुहरु 180 डिग्री0मिनेट 0.00 सेकेन्ड उत्तर र अक्षांश 74 को साथ रहन्छन्। डिग्री ० मिनेट र ०.०० सेकेन्ड पश्चिम, नक्सामा बिन्दु पनि देखाउँदैन। यदि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने म कदर गर्छु। ग्लोरिया डोमिन्गुएज।
स्पाम मेल जाँच गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ टेम्प्लेट डाउनलोड लिंक त्यहाँ जान्छ
कृपया गुगल अर्थ फाइलहरूमा डाउनलोड गर्ने टेम्प्लेट किन आइपुगेन भनेर पुष्टि गर्नुहोस्, UTM मा भौगोलिक निर्देशांक पास गर्ने एउटा आइपुग्यो। धन्यवाद। EDML
हामीले यसलाई वास्तवमा म्याक IOS मा यो प्रयास गर्नुभएन।
जवाफ दिनु भएकोमा धन्यवाद, तपाईंले मलाई जे भन्नुभयो मैले त्यही गरें। समस्या जारी रह्यो, तथापि, त्यसपछि मैले निर्यातको लागि kml फाइलको नाम परिवर्तन गरें र यो राम्रो भयो। साथीको सहयोगको लागि धन्यवाद, मैले "\_SIMV\_MAPAS.000.000.000.kml" बाट "\_SIMV\_MAPAS\_programa.kml" मा परिवर्तन गरें। अब यसले निर्यातको लागि तोकिएको फोल्डरमा पठाउँदैन तर अन्तमा फाइल उत्पन्न हुन्छ, यो एक्सेल स्प्रेडसिट अवस्थित भएको फोल्डरमा रहन्छ।
मलाई आशा छ कि तपाईं बग पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई सन्झ्यालमा राम्रो काम गरें तर अब म म्याकमा काम गरिरहेको छु र त्यहाँ छन् भने यदि तपाईसँग कुनै सुझाव छ भने म यसको प्रशंसा गर्नेछु। फेरि धन्यवाद
नाम र एक सजिलो बाटो प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि:
c: नक्सा .kml
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँसँग त्यो डाइरेक्टरीमा लेख्न अधिकार छ, त्यहाँ म्याक ब्राउजरबाट फाईल सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै।
म एक म्याक प्रयोग गर्न खोज्नु छु जब म उत्पन्न मलाई भन्छ "त्रुटि भएको छ '52' रनटाइम, नाम वा नम्बर गलत फाइल।"
यसले मलाई चार विकल्पहरू दिन्छ, पहिलो एक निष्क्रिय, म केवल वास्तवमा अन्तिम मध्ये तीन को लागि मात्र चुन्न सक्छु:
1. जारी राख्नुहोस् 2. अन्त्य 3.डिबगिङ 4.मद्दत
म डिबग छनौट गर्छु र सञ्झ्यालले यसो भन्छ:
उप उत्पन्न KML ()
'जेनेरेट KML म्याक्रो
'म्याक्रो Geofumadas को लागी सम्पादित
यदि अन्त्य गर्नुहोस्
तपाइँ यसलाई यसलाई kml ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ
तपाईं यसलाई gvSIG वा कुनै अन्य GIS कार्यक्रमको साथ गर्न सक्नुहुन्छ
एंटोनियो becerril भन्छिन्:
मैले गुगल पृथ्वीमा dwg रेखाचित्र अपलोड गर्न आवश्यक छ, जस्तै म, रेखाचित्र UTM निर्देशकमा बाटो को अक्ष हो।
यो हुन सक्छ:
C: / नक्सा /
सबैभन्दा व्यावहारिक कुरा यो हो कि इन्टरनेट ब्राउजरबाट, रुट हेर्नको लागि ठेगाना खोज्नुहोस्, किनकि यदि तपाइँसँग खाली ठाउँ जस्तै: "मेरो कागजातहरू" भएको रुटको नाम छ भने, तपाइँ यसलाई ब्राउजरमा देखा पर्ने रूपमा लेख्नुपर्छ। url।
जर्ज ईचेवर्रिया भन्छिन्:
नमस्ते, के तपाई मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? मैले "Execution error 75" पाएको छु, मलाई kml फाइल सिर्जना गर्नका लागि "मार्गहरू" को उदाहरण दिनुहोस्। मेरो कागजातहरूको उदाहरण वा डाउनलोडहरूमा वा डेस्कटपमा। धन्यवाद।
धन्यवाद, म स्पाममा हुनुहुन्थ्यो।
SPAM मेल जाँच्नुहोस्, कहिलेकाँही त्यहाँ सीधा डाउनलोडको लागि लिङ्कको साथ आउनु भएको सन्देश छान्नुहोस्।
कुनै पनि तरिकाले हामी यसलाई सीधा तपाईंको ईमेलमा पठाइएको छ।
मैले पेपैलद्वारा भुक्तान गरेको छु तर फाइललाई डाउनलोड गरिएको छैन, यदि उनीहरूलाई आईडी चाहिन्छ भने। को लेनदेन पठाइएको छ।
हामीले एकमात्र तरिका पेपैलसँग सम्बन्धित पेपैल वा डेबिट / क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ।
जोसे RIVERA CABALLERO भन्छिन्:
म तुरुन्तै Google Earth मा Excel अनुप्रयोगको खरिदको आवश्यकता पर्दछ, तर मेरोसँग मात्र डेबिट कार्ड छ।
मैले ट्राफिक बनाउनको लागि पेरूमा कुनै सम्पर्क छ भने के गर्नुपर्छ?
कृपया, मलाई आवेदन आवश्यक छ URGENCY।
जोसे रिवेरा - लिमा, पेरू।
मलाई यो परीक्षणको लागि प्रयोग गर्दै फोटोको ठेगाना पठाउनुहोस् र के हुन्छ भने हेर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ यो प्रश्न उठ्छ कि मार्ग खराब बनाइएको छ। त्यो बाटो कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि एउटा तरिका भनेको ब्राउजरबाट छवि फाइल खोल्नु हो, छविमा दायाँ क्लिक गरेर र खोल्नुहोस्… र ब्राउजर छनौट गरेर; त्यसैले तपाईले माथिको बाटो हेर्नुहुन्छ।
मैले तस्बिरलाई स्थानीय मार्गबाट ​​थप्न खोजे तर यो काम गर्दैन, जब म वाक्य प्रविष्ट गर्दछु भनी फोटोलाई अलग रूपमा थपिएको छ र डट तत्वको भागको रूपमा होइन। साथै जब म छवि प्रदर्शन गर्न को लागी केवल फ्रेम बाहिर जान्छ तर फोटो होइन।
यदि म जोडिएको छ भने ट्याबमा हेर्नुहोस्।
यदि तपाईं छैन भने, तपाईं सक्नुहुन्छ editor@geofumadas.com
र एक नियुक्ति बनाइयो।
नमस्कार सम्पादक, तपाईले मलाई टेम्पलेटको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ जुन तपाईंले मलाई बेचेको हो, के तपाई मलाई च्याटमा जवाफ दिन सक्नुहुन्छ?
खैर, व्यवहारमा आदर्श यसलाई GIS कार्यक्रमको साथ खोल्न र यसलाई kml मा निर्यात गरिन्छ।
यदि यो असुविधाजनक छैन भने, यो मेरो मेलमा पठाउनुहोस् र म तपाईंलाई बताउन सक्छु यदि म तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छु, किनभने म व्यस्त छु कि तालिकाहरू के हो भनेर हेर्दै।
सम्पादकले तपाईलाई कुन कुरा बुझ्न सकेनन्
मैले लेखा परीक्षकबाट निजीकृत मद्दत कहाँ पाउन सक्छु ... मलाई तुरुन्तै तपाईंको सहयोगको आवश्यक छ, जेसुकै पनि यसले खर्च गरे पनि, धन्यवाद।
माफ गर्नुहोस् तिनीहरू एक्सेल ढाँचामा छन्, सबै भन्दा 600 बिन्दुहरू मा एक्सेलमा छन्।
ब्याजको बिन्दु: Aceros actspan
अक्षांश: 20.654443 देशान्तर:-103.377499
माथिल्लो: (20.662213, -103.372706) (20.662213, -103.382293) (20.654444, -103.387087) (20.646674, -103.382293) (20.646674, -103.372706) (20.654444, -103.367912)
यही हो जुन म रुचि संस्करण गुगल धरतीको बिन्दुमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छु, कुरा यो हो कि त्यहाँ interest०० भन्दा बढी पोइन्टहरू छन् जुन मैले किमीएल ढाँचामा खाली गर्नुपर्दछ? मलाई थाहा छैन यदि तपाईं व्याख्या गर्नुहुन्छ भने ...
हामीलाई एक बिन्दुको डेटा कसरी छ भन्ने एउटा उदाहरण दिनुहोस्, र कुन ढाँचामा तिनीहरू छन्।
हेलो ... माफ गर्नुहोस्, मैले गुगलको धरतीमा हेर्नका लागि उनीहरूको निर्देशांकको साथ रुचिका बिन्दुहरूको पूर्ण फाइल रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ गुगलमा यसलाई हेर्न ... कसैले मलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछ, धन्यवाद।
खैर, मलाई खुशी छ कि यसले काम गर्यो।
म स्थानीय फेरि र निश्चित सही जाँच बिन्दु दशमलव विभाजक, को अल्पविराम विभाजक र अल्पविराम हजारौं विभाजक पनि तयार हुनुपर्छ।
तयार, योगदानको लागि धन्यबाद!
यसलाई जाँच्नुहोस् र ठीक छ, मलाई इन्डोनेशियामा पठाउनुहोस्।
जाहिरा तरिकाले एक्सेलका इकाइहरू र इकाइहरूलाई पठाइने इकाइहरू बीचको विरोधाभास छ।
तपाईँ त्यो नियन्त्रण क्षेत्रमा, क्षेत्रीय सेटिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिन्दु को दशमलव को विभाजक र हजारौं र अल्पविरामका अल्प विभाजकले सूचीहरूको विभाजक पनि जाँच गर्नुहोस्।
मैले तिनीहरूलाई लेखे जस्तो लेखे:
792713.85 एक्स समन्वयनमा
YN समन्वय Y समन्वयमा
र त्यहाँ एउटा विन्डो छ:
"रनटाइम त्रुटि '13' भयो।
अन्तिम, डिबग वा मद्दत गर्नुहोस्।
प्रकारहरू मेल खाँदैनन्
यो डट ढाँचा हो।
तपाईंले फारममा डेटा लेख्नु पर्छ:
792713.85 X समन्वयमा
Y समन्वयमा 1127836.33
काेशिस गर। किनभने टेम्प्लेटले हजारहरूलाई अलग गर्न अल्पविरामहरू र दशमलवहरू छुट्याउन बिन्दुहरूलाई विचार गर्ने हो; तपाईंले यसलाई यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ।
यी मेरा समकक्ष हुन्,
VD-0 792.713,85 1.127.836,33 19N
VD-1 792.680,07 1.127.822,15 19N
VD-2 792.528,78 1.127.833,33 19N
VD-3 792.301,83 1.127.895,05 19N
VD-4 792.191,63 1.127.895,05 19N
र जब म यो कार्य गर्दछु, मलाई इन्डोनेसियामा पठाउनुहोस् र यी समकक्ष वेनेजुएला को बोलिभेरियन रिपब्लिक, कुनै पनि सुझाव हो?
Yorodis Ramírez भन्छिन्:
मेरा सबै प्रश्नहरू जवाफ दिईएको छ !!
एलिजा गोंजेलेज भन्छिन्:
त्रुटि खाली गर्नुहोस्:
मार्ग / फाइल पहुँच त्रुटि
यो किनभने मैले ड्राइभ C मा पहुँच प्रतिबन्धित गरेको छु: पथ परिवर्तन गर्दा कुनै समस्या बिना उत्पन्न हुन्छ। म बहुभुज उत्पन्न गर्ने एउटा गर्ने प्रयास गर्नेछु।
तपाईं तिनीहरूलाई फिर्ता प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् कि तपाईंको अर्डर उत्तर, पूर्व (लाट, लामो)
जबकि टेम्प्लेटमा यो क्रम मा छ पूर्वी उत्तरी (लामो, लात)।
तपाईंले अल्पसंख्यकहरू हटाउनु पर्छ, त्यसैले तिनीहरू संख्याको रूपमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
मैले परीक्षण गरे र यो वास्तवमा तपाइँको क्षेत्रमा आइरहेको छ, पुनः प्रयास गर्नुहोस् र मलाई थाहा दिनुहोस्।
मलाई अनुमान छ कि म एक अद्यावधिक गर्न चाहन्छु ताकि समन्वयको अर्डर लेट, लामो समय जुन सामान्यतया सबै भन्दा साधारण प्रयोग हो।
यहाँ म डोमिनिकन गणतन्त्रको क्षेत्रमा निम्न मापदण्डहरूसँग क्षेत्रमा लिइएका केही समन्वयहरू छोड्दछु:
जब मैले तिनीहरूलाई अपलोड गर्न खोज्यो तिनीहरू दक्षिण अमेरिकामा पसे।
म तपाईंलाई निम्न समीक्षाको सुझाव दिन्छु:
याद गर्नुहोस् कि गुगल अर्थ अर्थोफोटोहरू विस्थापित छन्, विभिन्न भिन्नताहरूसँग। त्यसैले टेम्प्लेटको साथमा तपाईले थाहा पाएका निर्देशांकहरू उत्पन्न गर्दा, कुन समन्वय गुगल अर्थले देखाउँछ भनेर जाँच गर्नुहोस्, यदि तपाइँले Datum WGS84 को साथ टेम्प्लेटबाट निर्यात गर्नुभएको कुरासँग मेल खान्छ।
मान्य गर्न के लागी रोचक के हो भने समकक्ष मेलहरू हो, यससँग यसको गणना त्रुटि छ।
यदि समन्वय मेल खान्छ, तर फोटोको सन्दर्भमा यसलाई विस्थापित गरिएको छ, यो छविबाट त्रुटि भएको हुन सक्छ। जे भए पनि, म सुझाव दिन्छु कि तपाईंले फेला पारेका त्रुटिहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्, किनकि मैले नि:शुल्क प्रयोगको लागि टेम्प्लेट उत्पन्न गरेको छु तर यसलाई अवलोकनको साथ प्रतिक्रिया चाहिन्छ।
अर्को चरण बहुभुज उत्पन्न गर्न हुनेछ, हामी अर्को लेखमा हेर्नेछौं।
स्थानीय डाइरेक्टरीमा मार्गहरू राख्नको लागि, यो लेख जाँच गर्नुहोस्
मान यो फाइल फाइल स्थितिमा C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, त्यसपछि कोड हुनेछ:
तपाईंको 19 क्षेत्रमा अफसेट कितना छ?
यदि तपाईं मलाई प्रमाणित गर्न, एक समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले छाप दिन्छ कि तपाईं डाइरेक्टरीमा लेख्ने अधिकार छैन C:
मेरो प्रयोगकर्ताको कागजात भित्र बाटो प्रयास गर्नुहोस्।
के तपाईं पक्का हुनुहुन्छ WGS84 प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
जाँच्नुहोस्, मलाई थाहा छैन यदि तपाईंको देशमा प्रणाली केहि गलत छ।
विस्थापन कस्तो छ?
चुरोट, किनभने यी मुद्दाहरूको बारेमा लेख्न तपाईं एक गाँजा सिगार धूम्रपान गर्न को लागी ... Hehe।
मार्सोस डियाज भन्छिन्:
योगदानको लागि धन्यबाद .. एक्लो .. !!
म एक स्थानीय निर्देशिका फोटोहरू अपलोड प्रक्रिया गरिरहेको थियो र थप मैले फोटो वेब निर्देशिका देखि भाग्यो किनभने यदि कसरी यो बाटो के गर्ने विस्तृत सक्छ भने, satisfactorily निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
मैले जोन 19N मा निर्देशांकहरू पनि प्रविष्ट गरें र डाटा पूर्ण रूपमा विस्थापित भयो।
धन्यवाद मिल्यो !!
वान्डर सेन्टाना भन्छिन्:
शुभ साँझ गब्रिएल,
UTM समन्वयको सूचीमा, उत्तरी गोलार्धको 19 क्षेत्रको साथमा, विशेष गरी डोमिनिकन गणराज्यमा, यो क्षेत्रमा र ती समकक्षहरूमा विस्थापित हुन्छ। मैले धेरै अवसरमा प्रक्रिया दोहोर्याएँ, विभिन्न डेटा र परिणाम समान थियो। मेरो चिन्तामा उपस्थित हुनको लागि धन्यवाद।
म यसको बारेमा सोच्नेछु, मलाई लाग्छ कि यो यो टेम्प्लेटको2संस्करण हुनेछ, जस्तै हामीले हामीले गरे कि ओएससीएड बिन्दुहरू र अंकहरू पठाउँदछ
मैले त्रुटि पाउँछु:
के किनभने हामीले पहिले खाली खाली फाइल उत्पन्न गर्नु पर्छ?
म म्याक्रोहरू कसरी काम गर्ने भनेर बुझ्ने कोशिश गर्नेछु किनकि मलाई लाग्छ कि यसबाट, शिर ठाडो पनी बहुभुज उत्पादन गर्न यो तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनेछ। शुभेक्षा सहित …